Black Friday Ndị na-azụ ahịa - Owl Night na Nnụnụ Oge | Martech Zone
The 2013 Chọta & Chekwa Black Friday Shozụ ahịa Survey na-egosi otú, mgbe na ihe mere Night Owls na Early Bird shop na Black Friday. Ọ bụ ezie na ọ bụ ndị ahịa ahụ na-akpali isi, ndị na-azụ ahịa Black Friday na-akpali akpali site na mkpali nke asọmpi ahụ iji chọta ezigbo azụmahịa ma yikarịrị ka ha nwere ọdịnala wuru na ịzụ ahịa Black Friday.
Black Friday shoppers-egosi obere ụlọ ahịa ika iguzosi ike n'ihe na-Elezie rata site kpọmkwem amụọ ma ọ bụ ihe ha na-ahụ mgbe ha na-eme atụmatụ ha ịzụ ahịa njem. Kindsdị azụmahịa ndị kachasị adọrọ adọrọ bụ ndị na-enye mbelata ego. O yikarịrị ka ha ga-emecha ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ezumike ha na Black Friday.
Anyị na-enyocha ma na-amụ ndị niile na-azụ ahịa, mana Black Friday Shopper bụ ụdị dị iche iche, a ibu ahịa onye na-eme nke ọma n'ịchọta azụmahịa kacha mma na ịbawanye ụbọchị. Site na nyocha & Chekwaa, anyị chọpụtara na ha bụ ndị nhazi, ha hụrụ ọ theụ nke ịchọta nnukwu ihe ma na-anabata ngwa ngwa ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eme atụmatụ iji mee ka ụbọchị ahụ dịkwuo elu. Ọ dịkwa mma ịhụ ọdịiche dị n'etiti ndị na-azụ ahịa bụ ndị hapụrụ n'etiti abalị, na ndị hapụrụ ihe mbụ n'ụtụtụ. Ben T. Smith, IV, CEO nke Wanderful Media
Night Ikwiikwii vs. Early Bird Black Friday Shoppers
The Chọta & Chekwa nnyocha e mere tụnyere ihe abụọ ụdị dị iche iche nke Black Friday: ndị Owls Abalị - Black Friday shoppers ahapụ ụlọ ha tupu 5:00 AM, na Nnụnụ Oge - Black Friday shoppers ahapụ ụlọ ha mgbe 5:00 AM.
Ndị na-ere ahịa Owl Night nwere ike nweta ọtụtụ ịzụ ahịa ezumike ha mechara - 63 pasent na-emezue ihe karịrị ọkara nke ịzụ ahịa ha na Black Friday, ma e jiri ya tụnyere 42 pasent n'etiti ndị na-ere ahịa na Nnụnụ Early Bird na-ahapụ mgbe 5 AM gasịrị.
Na mkpokọta, pasent 53 nke Night Owls na 38 pasent nke Early Birds kwuru na ha "hụrụ ya n'anya" mgbe a jụrụ ha ka ha chere banyere ahịa Black Friday na-amalite n'isi ụtụtụ Tọzdee ma gbasaa na Sunday.
Ihe dị ka 75 pasent nke Night Owls na-azụ ahịa maka ngwá electronic, ma e jiri ya tụnyere pasent 60 nke ndị na-azụ ahịa na Nnụnnụ.
Ọ bụ ezie na ndị ahịa abụọ ahụ nwere mmasị na ịchọta nnukwu ego, pasent 40 nke Night Owls kwuru na ha nwere asọmpi ahụ, vs. 24 pasent nke ndị na-azụ ahịa na nnụnụ.
Black Friday na-azụ ahịa Nyocha na Mepụta Atụmatụ Egwuregwu
Nchọpụta dị mkpa nke nyocha ahụ na-ekwu na pasent 67 nke ndị na-azụ ahịa ọ bụghị naanị nyocha na ịtọpụta atụmatụ maka Black Friday, kamakwa nwere atụmatụ dị iche iche kwa afọ dabere na ebe ha ga-ahụ ahịa kachasị mma.
Omenala mgbasa ozi ọdịnala dịka mgbasa ozi akwụkwọ akụkọ, televishọn, na ozi ederede ka na-atụle n'etiti isi mmalite ndị ahịa Black Friday; n'ezie, ọ bụ ihe ka n'ọnụ ọgụgụ (pasent 36) ka họọrọ akwụkwọ akụkọ dị ka isi iyi ihe ọmụma. Mana mgbe naanị 29 pasent kwuru na ozi ịntanetị bụ isi mmalite nke ozi, pasent 82 kwuru na ha ga-enwe mmasị ịnweta ozi ịntanetị na ahịa Black Friday.
Ngwaọrụ ekwentị na-adịwanye mkpa mgbe ị na-azụ ahịa. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ma ọ bụ jiri ma ọ bụ tụlee iji ngwaọrụ mkpanaka ha iji nyere aka na ịzụ ahịa Black Friday - nke mbụ ha ga-eji ya lelee ọnụahịa ma ọ bụ jiri geo-locator chọta ahịa dị ha nso. Ha nwekwara mmasị n'iji ekwentị mkpanaka ha na-agagharị na mgbasa ozi Black Friday mgbe ha na-agagharị.
Lee infographic site na Na-awagharị:
Tags: nwa ogeNnụnụ OgeOwls Abalị
TapSense: Nduzi zuru ezu maka ire ahia nke 2014
Ọkt 30, 2013 na 7:22 AM
Nnukwu agụ Doug! Enwere m ezigbo oge ịgụ ya ..